Maxay tahay sababta aysan da'da uga muuqanin dadka reer Aasiya? - Muraayad
Home Nolosha Maxay tahay sababta aysan da’da uga muuqanin dadka reer Aasiya?
Maxay tahay sababta aysan da’da uga muuqanin dadka reer Aasiya?
Maxay tahay sirta dadka u muuqda inay da'dooda aad uga yar yihiin?
Inta badan dadka kasoo jeeda Aasiya kama muuqato da'dooda saxda ah | Image Credit: Getty Images
Dadka caalamka siyaabo kala duwan ayey da’da uga muuqataa. Kuwa kasoo jeeda qaaradda Aasiyana waxay nasiib u leeyihiin in aysan mar walba ka muuqanin da’dooda saxda ah.
Daraasad la sameeyay ayaa sidoo kale muujiyay in haweenka qaaradda Aasiya ay ka caafimaad badan yihiin kuwa qaaradaha kale.
Tusaale ahaan, qiyaastii hal qof oo ka mid ah 15-kii ruux ee ku nool Jaoan waxay da;diisa ka weyn tahay 100 sano, Sidoo kale dalka Shiinahana waxaa ku yar haweenka uu ku dhaco kansarka naasaha ee dunida kale aadka ugu badan.
Haddaba maxay tahay sirtooda?
Warbixintan aad idiin soo diyaarinnay ayaad ka ogaan doontaan waxyaabo badan oo ku saabsan sababta ay reer Aasiya ugu muuqdaan inay ka dhalinyar yihiin da’dooda saxda ah.
1- Habka nolosha iyo waxyaabo ay joogteeyaan
Waxyaabo badan ayaa sababa in da’da ay ka muuqato qofka balse waxa ugu muhiimsan waa noocyada raashinka aad cunto iyo bii’ada aad ku nooshahay.
Raashinka nafaqada isku dheellitiran leh, jimicsiga joogatda ah, daryeelidda maqaarka, balwadaha aan leenahay iyo waxyaabo kale ayaa saameyn ku leh sida aad u ekaaneyno.
Mid ka mid ah qodobbada ugh waaweyn ee dhalinyaranimada dadka reer Aasiya uga muuqato waa raashinka ay cunaan oo isku dheellitiran.
Cuntooyinka meelaha kale ee caalamka laga daneeyo waa kuwo aan caafimaad lahayn, laakiin marka aad makhaayadaha Asian-ka booqatid waxaad ku arkeysaa khudaar, raashinka badda, iyo cuntooyin kale oo fitamiinno leh.
Waxaa kale oo ay reer Aasiya caan ku yihiin daryeelka maqaarka iyo isqurxinta, iyagoo wax soo saarka la isu qurxiyana ku dara dawooyin ka hortaga hawada wasakheysan iyo qorraxda.
2- Lafta wajigooda oo ballaaran ayaa ka hor tagta in maqaarka uu dabco
Dhammaanteen marka ay da’da nagu kororto waxaa sii daciifa unugyada isku haya lafta iyo maqaarkeenna.
Laakiin marka la eego dadka reer Aasiya lafta ku taalla bartanka wajigooda oo isku xirta dhabanka ilaa qeybta kore ee wajiga ayaa ballaaran, sidaas darteedna wuu yar yahay xaddiga qafiifnimada unugyada ee horseeda inuu soo kaduudmo maqaarka.
Sidoo kale, dada reer Aasiya baruur ayaa ku hareereysan indhahooda taasina waxay daahisaa in maqaarka uu ka soo jajabo dhinaca idhaha.
3- Maqaarkoodu wuxuu ka difaacaa qorraxda
Midabbada maqaarka ee kala duwan wuxuu mid walba hannaanka gabowga u wajahaa qaab u gaar ah.
Farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya maqaarka dadka caddaanka ah iyo kuwa midabbada leh – sida madowga iyo maroonka – waa maaddada loo yaqaanna melanin ee ku jirta maqaarka dhexdiisa.
Qof walba qofka uu ka melanin badan yahay ayuu maqaarkiisa uga adkeysi badan yahay qorraxda oo fallaaraheeda ay qeyb ka qaataan gabowga.
4- Dhanka dhaxalka dabeecadda jirka
Waxaa mar dhow la ogaaday in dadka qaar ay unugyada difaaca maqaarka ay u dhaxlaan fac ka fac. Daraasad ilaa hadda laga sameeyay dalka Mareykanka oo kaliya ayaa lagu ogaaday in haweenka madowga ah ay leeyihiin dhaxalka noocaas ah oo labo jibaar ka badan midka dumarka caddaanka ah.
Daraasado kale ayaa lagu sameyn doonaa dadka Aasiya kasoo jeeda iyo kuwa loo yaqaanno Hispanic, waxaana suuragal ah in reer Aasiya ay unugyada dhaxal ahaanta uga imaada waalidiinta ay ku badan yihiin.
5- Waji carruureed
Waxaa kale oo jirta sheeko ku saabsan in badanaa dadka reer Aaasiya qaabka uu wajigooda u sameysan yahay, sida wajiga goobada ah (ama wareegsan), sunniyada kor u kacsan, bishimaha buurbuuran, sanka gaaban iyo garna guusan ay dhammaantood yihiin kuwo carruurta yar yar ay leeyihiin.
Taasi waxay ka dhigan tahay in qofka uu wajigiisa sidaas u sameysan yahay uu mar walba waji carruur leeyahay oo aysan durba da’ ka muuqaneynin.
Waxaa xusid mudan in ay jiraan dad badan oo u dhashay in aysan da’da ka muuqanin mar walbana dhalinyaro u eg iyagoo sanadkoodu uu badan yahay.
Previous article9 Arrimood oo ninkii sameeya ay dumarka jeclaanayaan
Next articleAtariishada filimkii Game Of Thrones maxaa wajigeeda muran loo galiyay?